Tonga Ianao hampijaly ny demony...
Naseho ny : 1 jolay 2020
Alarobia 01 jolay 2020 — Herinandro faha-13 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 8, 28-34 — Andriamanitra nampihavana an'izao tontolo izao aminy indray tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampihavanana tamintsika.
Rehefa avy nandresy ny tafio-drivotra sy ny ranomasina tamin’ny fampitoniana azy ireo i Jesoa, dia tojo lehilahy roa indray izay azonʼny demony sady tena masiaka. Noho izany tsy nisy olona sahy nanatona azy ireo. Fa i Jesoa kosa rehefa teo anoloanʼireto roa lahy izay azonʼny demony, dia nanaiky ireto farany fa Izy no ZanakʼAndriamanitra. Fantatrʼizy ireo avy hatrany àry fa tsy avelanʼi Jesoa hipetraka ela ao anatinʼireto olona ireto izy ireo ka niangavy Azy mba ho alefany any amin’ny kisoa, izay biby maloto ho anʼny Jody. Tsara ny manamarika fa na ireo kisoa àry dia tsy nanaiky ny hitoeranʼny demony fa naleonʼizy ireo nirifatra nivarina any anaty ranomasina ka maty tao.
Ny fandresenʼi Jesoa ny fanahy ratsy eto dia efa tandindona sahady ny fandreseny ny fahafatesana. Noho izany, tsy tokony hatahotra isika kristianina satria manana anʼilay Mpandresy anʼizao tontolo izao miaraka amin’ny Heriny. Tianʼi Jesoa àry, isika arakʼizany, mba handresy miaraka Aminy tahaka ireto lehilahy roa ireto izay nafahany tamin’ny fanangezanʼny fanahy maloto ka nampiverina indray ny fahafahanʼizy ireo sy ny fahamendrehany.
Izy Jesoa tokoa àry no ZanakʼAndriamanitra, eny na dia ny fanahy maloto aza dia manaiky izany. Tsisy izay tsy vitany, satria Izy no Tomponʼny fiainana. Zavatra tokana ary no hangatahiny amintsika : dia ny mandray Azy ao am-pontsika sy eo amin’ny fiainantsika mba hanafaka antsika amin’ireo sakana amin’ny fahamendrehana maha olona sy maha ZanakʼAndriamanitra. Aoka ary isika mba ho mpandresy miaraka amin’ilay ZanakʼAndriamanitra : handresy ny ratsy amin’ny tsara, handresy ny haizina amin’ny hazavana, handresy ny fankahalana amin’ny fitiavana.